လူတော်တော် များများ ကြိုက်ကြတဲ့ ဆေးဘဲဥ ဆိုတာကို စားသင့်သလား ??? – PoPinVdo
လူတော်တော် များများ ကြိုက်ကြတဲ့ ဆေးဘဲဥ ဆိုတာကို စားသင့်သလား ???
March 5, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ကျန်းမာ​ရေး / ဗဟုသုတNo Comment on လူတော်တော် များများ ကြိုက်ကြတဲ့ ဆေးဘဲဥ ဆိုတာကို စားသင့်သလား ???
ဆေးဘဲဥ (CENTURY EGG)ကိုစားသင့်သလား ???
ဆေးဘဲဥကို century egg,preserved egg,hundred year egg, thousand year egg, millennium egg ,ထုံးဘဲဥ , ဖီတန် ( တကယ်တော့ တရုပ်လို နာမည်ပါ pidan ) လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။
ဟိုတလောက maggi လို့ ခေါ်တဲ့လူကြိုက်များတဲ့ခေါက်ဆွဲခြောက် တွေထဲမှာ ခဲဓာတ်တွေ (lead) ပါတာများတာကို အိန္ဒိယမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ လို့ မက်ဂီး ခေါက်ဆွဲတင်သွင်းထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းပြစ်လိုက်ပါတယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆေးဘဲဥကို သတိရမိလို့ ဆေးဘဲဥအကြောင်းလေးမျှဝေဖြစ်တာပါ။
ဆေးဘဲဥကိုတရုတ်နိုင်ငံက နေပြီး စတင်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီး ရိုးရာ အားဖြင့် ဘဲဥ ၊ကြက်ဥ နဲ့ ငုံးဥတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ရွံ့မြေ ၊ ဆား၊ ထုံး၊ ထမင်း ပျော့ စတာတွေကိုလိုအပ်သလိုထည့်ပြီးအသုံးပြုကြပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်အားဖြင့် ဘဲဥ အကာ ဟာ စိမ်းပုတ်ရောင်မှသည် မီးခိုးရောင် ၊မီးခိုးရောင်မှသည် အညိုနက်ရောင်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီး ပြစ်ခဲမှု မှာလည်း အရည်အဖြစ်မှ ဂျယ်လီအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အနံ့ မှာလည်း ကန့် sulphur နှင့် အမိုးနီးယား (ကျင်ငယ်ရေနံ့) ဘက်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ PH level သည်လည်း ၉ -၁၀ ကြားပြောင်းလဲပြီး ပြင်းအားများသော အယ်လ်ကာလိုင်း ဖြစ်သွားပါတယ်။
ယနေ့ စားသုံးသူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက် များလားပြီးဝယ်လိုအားတိုးလာသောကြောင့် ထုတ်လုပ်သူတို့ က လအနည်းငယ်ကြာ ပြုလုပ်ရသော ဆေးဘဲဥဖြစ်စဉ်ကို ရက်ပိုင်းနှင့်ပြုလုပ်နိုင်ရန် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေ့ လာကြပါတယ်။ calcium hydroxide နှင့် sodium carbonate ပျော်ရည်တွင် ဘဲဥကိုစိမ်ခြင်းက ဆယ်ရက်အတွင်း ပုံမှန်ရိုးရာနည်း ဖြင့်ပြုလုပ်သော လအနည်းငယ်ကြာ ဆေးဘဲဥကို ပုံမှန်အရသာမပျက် ရရှိစေ တာမို့အချိန်ကုန်ခံထုတ်လုပ်မှုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုးကျိူး အနေနဲ့ကတော့ lead (ခဲ) ဓာတ်ပါဝင်မှုတွေတိုးလာတာပါဘဲ။ ဘဲဥထဲသို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် hydroxide and sodium ကို ဝင်ရောက်စေခြင်းက ခဲဓာတ်ကိုတိုးပွားလာစေတာဖြစ်ပါတယ်။
Lead poisoning ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းရဲ့ဆိုးကျိူးတွေကတော့
ခဲဆိပ်သင့် နေသလားဆိုတာကိုသိချင်ရင်တော့ သွေးဖောက်စစ်ဆေးရင်သိနိုင်ပါတယ်။ သွေးထဲမှာ ခဲဓာတ် ပါဝင်မှု ၁၀ မိုက်ခရိုဂရမ် ပါ ဒက်ဆီလီတာ ထက်ကျော်နေဘီဆိုရင်တော့ ခဲဓာတ် အဆိပ်မသင့်သေးသည့်တိုင်အောင် ခဲဓာတ်များနေဘီလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဗာဟုသုတ အနေနဲ့မျှဝေချင်တာလေးကတော့ ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းဟာ အစားအသောက်ခုတည်းကနေ နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ခဲနဲ့ ထိတွေ့သော သူများအားလုံး ရနိုင်တာဖြစ်ပြီး ၊ ခုရေးသားသော အကြောင်းအရာလေးကတော့ လူအများစု သတိမထား နိုင်သော အကြောင်းအရာလေးတခုကိုသာ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ရောင်ခြည် ကာကွယ်သော ခဲအကျီင်္ဝတ်သူ
မာကျူရီနှင့်ခဲဓာတ်ပါ သော ဓာတ်ခဲထုတ်လုပ်သော နေရာတွင်အလုပ်လုပ်သူ
စသောခဲနှင် ထိတွေ့သူတွေ မှာ ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အသိပညာ ဗာဟုသုတများခြင်းသည်မင်္ဂလာတပါး ။
KTV ဆိုင်မှ အဆိုရှင်မိန်းကလေး ခေါ်ရာနောက် လိုက်သွားသည့် ကိုရီးယားနိုင်ငံသား၏ ဒေါ်လာများ အခိုးခံရ
သေခြင်းတရားက မျက်စိတမှိတ်အတွင်း ဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ မဖြစ်ခင်က သတိပြုဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ